Shixnad Hub ay laheyd Shirkad Ammaanka oo ka hawlgasha Xeebaha Somalia oo la qabtay – idalenews.com
Ciiddamadda Badda ee Dalka Masar ayaa Faahfaahin ka bixiyay Dooni waday Shixnad hub ah oo lagu qabtay Badda Dalka Masar.
Afhayeenka Ciiddamadda Masar, Col. Ahmed Ali, ayaa sheegay inay Ciiddamada maalintii Khamiista ee la soo dhaafay qabteen Dooni nooca dheereeya (The Speedboat), oo mareysay meel ku dhaw Xeebta Ras Mohamed ee Badda Masar.
Afhayeenka ayaa bartiisa Facebook ku beeniyay warar horay loogu sheegay in Doonidaasi laga lahaa Dalka Iran ama Israel.
Afhayeenku, waxa uu Tilmaamay in baaritaan ay sameeyen ay ku ogaadeen inay Shixnadaasi hubka ee saaran Doonidaasi leeyihiin mid ka mid ah Shirkadaha Caalamiga ee Ammaanka ee galbiya Maraakiibta Ganacsiga ee isticmaala Badda Somalia.
Doonidaas oo uu ka dulbabanayo Calanka Dalka Togo ayaa waxa ay waday 64 Qoryaha lagu farsameeyo Dalka Maraykanka ee M6, 28-Bistoolado, waxaana la socday ilaalo u kala dhalatay Dalalka Maraykanka, Russia, Ukraine iyo Greece.
Afhayeenka waxa uu sheegay in qaar ka mid ah Doonyahay dheereeya ee lagu ilaaliyo Ammaanka Maraakiibta Ganacsiga si qalad ah ku soo galaan Badda Masar.